फिस्टुलापीडित ३ सय महिलाको उपचार- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
फिस्टुलापीडित ३ सय महिलाको उपचार
सुर्खेत — सुर्खेत फिस्टुला सेन्टरले प्रशब फिस्टुला भएका ३ सय महिलाको उपचार गरेको छ । यसअघि विभिन्न घुम्ती शिविरमार्फत उपचार गर्दै आइरहेको सेन्टरले १ वर्षदेखि प्रदेश अस्पतालस्थित आफ्नै भवनबाट उपचार गरिरहेको छ ।
आइएनएफ र अस्पतालको सहकार्यमा सेन्टरले सेवा दिएको हो । सेन्टरमा विदेशी विशेषज्ञ डा. शेलीसहित स्वास्थ्यकर्मीले उपचार सेवा दिइरहेका छन् । डा. शेलीका अनुसार प्रशव अवस्थामा लामो व्यथा लागेपछि पिसाब चुहिरहने समस्या हुनु फिस्टुला हो ।
‘गर्भवतीको स्वास्थ्यमा ध्यान दिए र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसूति सेवा लिए यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सानैमा बच्चा जन्माउनु, गर्भवती अवस्थामा कम स्याहार गर्नु, गर्भवतीले पोषिलो खाना नखानु, असुरक्षित प्रसूति हुनुलगायत कारण यो समस्या ग्रामीण क्षेत्रमा बढ्दो छ ।’ उनले आईएनफले विभिन्न घुम्ती शिविरमार्फत बिरामीको खोजी गरी फिस्टुलाको उपचार गर्दै आइरहेको बताइन् ।
प्रशव फिस्टुला दिवसका अवसरमा बिहीबार फिस्टुला उपचार केन्द्रमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमका सहभागीले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए । साइनिङ अस्पतालका व्यवस्थापक मंगल थारूले फिस्टुलापीडित महिला समाजमा अपहेलित हुनुपरेको बताए ।
प्रदेश अस्पतालकी नर्सिङ प्रमुख दीपा भट्टराईले गाउँमा गुणस्तरीय प्रसूति सेवा उपलव्ध नहुँदा फिस्टुलाको समस्या बढिरहेको बताइन् । प्रदेश अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डिनेन्ट डा. गणेश थापाले सरकारले निःशुल्क प्रदान गरेको गर्भवती जाँच सेवा लिए यो समस्या नहुने बताए । प्रदेश अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष श्याम कँडेलले यो समस्या महिलाको मानव अधिकारसँग पनि जोडिएकाले सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए ।
प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ ०९:१५
संस्थानले गहुँ खरिद गर्नै छाड्यो
जेष्ठ १०, २०७६ भवानी भट्ट
कञ्चनपुर — खाद्य संस्थानले कञ्चनपुरमा विगत झैं यस वर्ष पनि गहुँ खरिद गरेन । तराईका जिल्लामा खाद्यान्न संकलन गरी अभाव हुने क्षेत्रमा पठाउँदै आएको संस्थानले कञ्चनपुरमा ५ वर्षदेखि गहुँ खरिद गर्न छाडेको हो ।
संस्थानको महेन्द्रनगर कार्यालयले गहुँ तयार हुनुअगावै खरिदका लागि कोटा माग गरेको थियो । तर केन्द्रबाट कुनै कार्यक्रम नआएकाले खरिद गर्न नसकिएको शाखा प्रमुख जयराज जोशी बताउँछन् । ‘हामीले गहुँ पाक्नुअगावै केन्द्रमा पत्र पठाएर कोटा माग गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर धनगढीमा मात्रै ४१ सय क्विन्टल खरिद गर्ने कोटा आयो ।’
यस वर्ष कञ्चनपुरमा गहुँको उत्पादन राम्रो भएको थियो । त्यसकारण पर्याप्त खरिद गर्न सकिने संस्थानको अपेक्षा थियो । विगतका वर्ष पनि गहुँ खरिद नभएकाले यसपटक किसानलाई उचित मूल्य दिन पनि खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । खाद्य संस्थानले धान तथा गहुँ खरिद गर्ने भएपछि मात्रै मूल्य निर्धारण गर्छ ।
धनगढीमा संस्थानले गहुँ खरिद गर्ने भएकाले त्यहाँ मूल्य निर्धारण गरिएको थियो । कृषकहरूले त्यहींको मूल्यका आधारमा गहुँ बिक्री गरे । संस्थानले प्रतिक्विन्टल २७ सय ९० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । कञ्चनपुरका किसानले २६ देखि २८ सयसम्ममा गहुँ बिक्री गरेका छन् ।
संस्थानले धान पनि ढिलो गरी खरिद गर्दै आएको छ । त्यही कारण खरिद लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । गत वर्ष १० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य भए पनि ढिलो सुरु गर्दा ५ सय ९ क्विन्टल मात्रै खरिद भएको शाखा प्रमुख जोशीको भनाइ छ ।
धान, गहुँ खरिद नभएपछि खाद्य संस्थान महेन्द्रनगरका ३ गोदाम रित्ता छन् । गत वर्ष खरिद भएको केही धान कुटानी गरी क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीमा पठाएपछि २ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न राख्न सकिने क्षमताका तीनवटै गोदाम रित्ता भएका हुन् ।
संस्थानका गोदाम मात्रै रित्ता छैनन् । यहाँका ४ कर्मचारी पनि कामविहीन भएका छन् । संस्थानले तराईका जिल्लामा खाद्यान्न खरिद गरी अभाव हुने पहाडी र हिमाली जिल्लामा पठाउने गर्छ । तर ४/५ वर्षदेखि लगातार खरिद नगर्दा पहाडी जिल्लातिर पठाऊने क्रम घटेको छ ।
यस वर्ष समयमै धान खरिदको कार्यत्रम आए गत विगतभन्दा बढी धान खरिद हुन सक्ने जोशीको अपेक्षा छ । उनले यसका लागि केन्द्रमा पत्राचार गरिएको बताए ।